TRF na ntanetị 2016 | Akwụkwọ akụkọ Foundation na-akwụ ụgwọ na online
Home TRF na Press 2016
Ndị mgbasa ozi achọpụtawo Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ ahụ ma na-agbasa okwu banyere ọrụ anyị gụnyere: klas ịmara ndị na-agụ ụra; akpọ maka irè, ụbụrụ dabeere n'ụmụ nwoke na ụlọ akwụkwọ; mkpa maka ọzụzụ maka ndị na-ahụ maka nlekọta ahụ ike na NHS maka ịṅụ ọgwụ ọjọọ na onyinye anyị research na dysfunctions mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ. Peeji a gosipụtara ụfọdụ ihe ịga nke ọma anyị na pịa.
Akwụkwọ akụkọ na Online
October 2016. Mary Sharpe gosipụtara na nkọwa a site na Dr Linda Hatch na agụụ mmekọahụ na ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na UK.
Akwụkwọ akụkọ Sunday - Scotland Edition, 21 August 2016
E nwere ike ịhụ nsụgharị ahụ eji n'èzí Scotland Ebe a. Ọ chọrọ ndenye aha, agbanyeghị ị nwere ike ịdebanye aha maka akụkọ abụọ n'efu kwa izu. Ejikwa ya na akụkọ asụsụ Croatian a n’okpuru aha ya NAVUČENI NA PORNIĆE Djeca od 11 chi na ovisna su o nasilnom seksu nke Ana Muhar dere.
Akwụkwọ akụkọ Scottish Daily Mail gbasoro akụkọ Times ugboro abụọ. Akpa, ọ na-enye ndị na-esonụ ibe…
N'echi ya jiri ọtụtụ echiche wardgwọ Ọrụ Foundationgwọ na onye ndu ya…
Ndị na-eto eto na otu n'ime ụlọ akwụkwọ ndị ụlọ akwụkwọ kachasị na Capital ka ha na-etinye "klas ị mara" na-atụ egwu egwu riri ahụ.
Ụlọ akwụkwọ Fettes, bụ nke dịka praịm minista Tony Blair n'etiti ndị okenye ya, kpọrọ onye ọkachamara n'ịntanetị ka ọ bịa izute ụmụ akwụkwọ n'ọdịnihu n'afọ a.
Ọ na-abịa mgbe nchọpụta na-arịwanye elu nke nchọpụta jikọtara oge na-adị na porn na ọrịa na uche adịghị ike.
Enwere nkwupụtakwa na ịṅụ ọgwụ ọjọọ nwere ike imerụ ọmụmụ, atụmanya na mmekọrịta, yana ịdọ aka ná ntị ndị ọzọ na ọ nwere ike ịbawanyewanye n'ịhụ ihe ndị iwu na-akwadoghị nke mmejọ ụmụaka.
Mary Sharpe, onye ọkàiwu na onye nchoputa Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ, ọrụ ebere nke na-akwalite mmekọrịta ahụike, enyelarị ọkwa ọmụmụ porn na George Heriot na Dollar Academy na Stirling.
Otu ihe dị nso n'otu ụlọ akwụkwọ ahụ kwuru na nnọkọ ahụ bụ "obi ọjọọ na nke nduzi" banyere mmetụta nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ ahụ, na ebe ọzọ na-akọwa ha dịka "ihe na-adọrọ mmasị na nke bara uru".
Usoro ahụ egosikwa na ọ bara ezigbo uru na Fettes - nke ụgwọ ụgwọ nke £ 32,200 kwa afọ - kpebiri ime ya.
Sharpe kwuru na a kpọrọ ya ka ọ gaa klas ndị klas ahụ n'afọ a. "Ụlọ akwụkwọ ndị a ghọtara mmetụta ọjọọ ndị na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike inwe n'ahụ ụmụ akwụkwọ ha, n'ihe banyere ahụike uche ha na ọmụmụ ihe ha," ka Sharpe kwukwara.
Ntọala ya ejikọtara ọtụtụ puku okwu ụmụ okorobịa si Britain na mba ndị ọzọ na-ekwu banyere mmetụta ọjọọ nke ahụ ike ha.
Dị ka ịṅụ ọgwụ ọjọọ, Sharpe dọrọ aka ná ntị na ọkwa nkwụsị nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ na-arị elu ma na-anọgide na-ekpughe nakwa na àgwà ha nwere ike ịdaba, ya na ndị ọrụ na-achọ ihe ndị na-agbawanye agbawa iji mejuo ha.
"Ndị na-eto eto nwere ike ịgbapụ ngwa ngwa site na porn na-ada ụda, na-egwu porn na nwatakịrị ọjọọ, iji mejuo mkpa ha maka nsogbu ahụ," ka ọ gbakwụnyere.
Cameron Wyllie, bụ isi nke George Heriot, kwuru, sị: "Ọ dị ezigbo mkpa na ndị na-eto eto na-ekpughe ihe ize ndụ ndị dị na ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ site na nnyocha sayensị nke na-egosi na iji ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ eme ihe na-emerụ ahụ.
"Ihe akaebe na-eto eto na ihe a na-enwetụbeghị ụdị mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ n'ihi na ịntanetị, bụ nke a na-enweta ngwa ngwa site na smartphones na mbadamba nkume, na-eme ka ụmụ okorobịa ghara ịmalite inwe mmekọahụ.
N'ọnwa June, NHS Lothian kpọrọ Sharpe ka ya na ndị ọrụ na ụlọ ọrụ Chalmers Street na-ahụ maka ahụike na-ahụ maka ịmalite ịmalite ịda mbà n'obi.
Ogwe aka UK nke Huffington Post nyere ndị a akụkọ na 22 August 2016. anyị gosipụtara okwu dị mma site n'aka onye na-agụ na USA.
The Independent mere ngbanwu, nke kachasị, akụkọ Sunday Times, dị Ebe a.
E weere akụkọ ahụ n'ọtụtụ mgbasa ozi ụwa, ebe dị anya Vietnam na Indonesia.
Obiọma sitere n'aka ndị na-akwado mgbasa ozi na-ebipụta nsogbu na-akpali agụụ mmekọahụ
Otu ọrụ ebere nke onye na-akwado ya bipụtara akwụkwọ banyere mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ.
Mary Sharpe, onye na-abụghị onye ọrụ nke Ngalaba nke Ndị Nkwado, omume aka ekpe iji guzobe Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ, ọrụ ebere nke na-achọ ịmatakwu nghọta ọha mmadụ banyere circuitrị ụgwọ ọrụ nke ụbụrụ na otú o si emekọ mmekọrịta na gburugburu ebe obibi nakwa iji mee ka ahụike dịkwuo mma site n'ịkwalite nghọta ọha na eze banyere mgbidi ụlọ na nrụgide.
Na akwụkwọ ọhụrụ site na US Navy ndị dọkịta na Ụlọ Ọrụ Ụgwọ Ọrụ, nke isiokwu ya bụ "Ihe Ịntanetị Ịntanetị Na-akpata Mmekọahụ Mmekọahụ? Nyochaa na Akụkọ Ọgwụ", A na-atụ aro usoro ụbụrụ nke ịntanetị nwere ike ịmepụta nsogbu mmekọahụ ọbụna na ndị na-ekiri ahụ ike. Ndị na-amalite iji n'oge mmepe mmepe nke oge ntorobịa na eto eto na-esikarị ike.
Ọtụtụ ndị ọkàiwu na ndị omekome na-agba ndị omekome ejiriwo aka ha kwupụta nchegbu ha banyere mmetụta nke ikiri ndị gba ọtọ na omume nke ndị na-eto eto Akwụkwọ akụkọ iwu nke Scottish.
Mmekọrịta Sharpe kwuru na ọ na-eche na ịrị elu nke mpụ na-enwe mmekọahụ nwere ike "na-akpa ụfọdụ site na mmụba nke iji ike ịntanetị na-eme ihe ike".
O kwukwara, sị: "Obi abụọ adịghị ya na mmejọ ụmụaka na ndị ọzọ na-abịa n'ihu ịkọ mwakpo mmekọahụ na-arụ ọrụ dịka ndị uweojii na - achọpụta nke ọma, ma n'okpuru ya, ịṅụ ọgwụ ọjọọ niile na ụbụrụ nke ụbụrụ na - Mgbanwe mgbanwe ụbụrụ ga-abụrịrị otu akụkụ.
"Nke a ga - ewere ndị uwe ojii na ndị omekome na ndị uweojii na-ahụ maka ahụ ike ma ọ bụrụ na anyị ga - ahụ mmebi ọ bụla na ebe a."
August 22, 2016. Mma ulo akwukwo
Onye ọkaiwu Mary Sharpe kụrụ akụkọ na nso nso a mgbe ọ pụtara na ụlọ akwụkwọ mbụ nke Tony Blair ga-enye klaasị "mmata porn" n'etiti ụjọ maka mmetụta na-adịghị mma nke ihe mmekọrịta nwoke na nwanyị nwere ike inwe na ụmụ akwụkwọ.
College Fettes na Edinburgh, otu n'ime ụlọ akwụkwọ ọha na eze kachasị na UK, kpọrọ Ms Sharpe, onye nchoputa ọrụ ebere nke wardgwọ Ọrụ, ka ọ gwa ụmụ akwụkwọ nọ ebe ahụ na mbido afọ na-esote.
Ma ugbu a atụmatụ ezube ịme ka ndị dị otú ahụ ọmụmụ ebe a iji gbanye ụmụ akwụkwọ na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ site na ịdọ ha aka ná ntị banyere ihe ga-esi na ya pụta.
Mgbe ọ na-agwa Belfast Telegraph, Darryl Mead, di Ms Sharpe na onye isi oche nke Reward Foundation, nke na-akwalite mmekọrịta dị mma, gwara Belfast Telegraph na Northern Ireland nọ na nnọkọ ahụ.
"Mụ na Mary na-enye nkwupụta ọnụ na ụlọ akwụkwọ na anyị nwere nnukwu mmasị ịme ọzụzụ n'ofe mpaghara ahụ," ka Dr Mead kwuru.
“Anyị enwetabeghị ụlọ ọrụ ọ bụla n'uche, mana Northern Ireland nọ na ndepụta nke ihe anyị ga-eme ma anyị dị njikere inye klaasị n'ụlọ akwụkwọ praịmarị, sekọndrị na ụtọ asụsụ.
Obi dịkwa anyị ụtọ iso ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ enwe nnọkọ iche iche n'ihi na ha chọrọ ịmụ banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. ”
Ms Sharpe gwara Radio Ulster's Nolan Show ụnyaahụ na, ọ bụ ezie na ha na-emeso ndị 16 na 17 afọ ugbu a, ha bu n'uche ịmalite ịkụziri ụmụaka na afọ ikpeazụ ha nke ụlọ akwụkwọ praịmarị.
O kwuru, sị, "Nnyocha na-egosi na ụmụaka na-etolite etolite na-achọ ihe osise gba ọtọ na ihe yiri nke ahụ bụ 10 afọ.
"Taa, ịntanetị na-enye ha ihe niile site na ịpị ma ọ bụ swipe nke mkpịsị aka, yabụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ichebe ụbụrụ ụmụaka mgbe ha kacha nwee ike ịkpụzi, anyị ga-eme ka ha mara ugbu a."
Barrister ahụ kwuru na ọ bụ ezie na “ilele ihe egwu na ịgba ọtọ agaghị emerụ ihe ọ bụla”, enwere ihe egwu na ọ ga-abụ ọnụ ụzọ ámá nke ihe ndị ọzọ doro anya, nke nwere ike ibibi ihe.
"Brainbụrụ na-agwụ ike na ihe mgbe ọ hụrụ ya oge ole na ole ma ọ na-achọ ihe ọhụụ ma ọ dị mfe ịbawanyewanye na hardcore porn na ime ihe ike na ụmụaka na-akpali nke ahụ," ka o kwuru. "Ha na-amụta ihe niile adịghị mma na ịntanetị na ọ na-emebi ha."
Mmetụta ịda mbà n'obi na ADHD (nlezianya anya nke ọrịa hyperactivity) bụ nanị abụọ n'ime ahụike uche uche Ms Sharpe jikọtara na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ.
O zoro aka na nsogbu na-arịwanye elu nke nrụrụ erectile n'etiti ụmụ nwoke 20 "n'ihi na ha na-ele porn n'oge ha dị afọ iri na ụma".
“Ha kwụsịrị inwe obi ụtọ site na ndị mmekọ ha ma ọ bụ site na mkpali agụụ mmekọahụ nkịtị n’ihi na a na-eji ụbụrụ ha eme ihe na-akpali akpali na ịntanetị,” ka o kwuru.
“Kama ịmụ banyere otú e si akparịta ụka ụmụ nwanyị na ijide aka ma na-eme ihe ọ bụla dị nro, ha na-ahụ ihe ndị dị egwu.”
DUP MLA Nelson McCausland nabatara mmegharị ahụ iji mee ka klaasị nye ụmụntakịrị obodo ahụ, na-ekwu na ọ "ziri ezi na ndị na-eto eto kwesịrị ịkụziri ha ihe egwu nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ".
O kwuru, sị: "Ọmara dị ukwuu taa gbasara ụdị ihe egwu dị otu a na otu o si emetụta ụbụrụ mmadụ." "Ihe ọ bụla nke na-enyere ndị na-eto eto aka ibi ndụ dị mma karị ma mara ihe egwu ndị ahụ bụ ezigbo ihe."